Sina Cover firafitra fanamafisam-peo fanodinana fampanjifaina tsotra kahie mpianatra mpanamboatra sy orinasa | Yuxingyua
Fonon-kazo fonosana manokana ho an'ny mpianatra manokana
MOQ: 1000 kopia
Fonosana vokatra: Kitapo mametaka OPP miampy carton ho an'ny fonosana
Kahie ho an'ny mpianatra taratasy
Misafidiana taratasy ho an'ny kahie ho an'ny mpianatra:
Voalohany, ny kalitaon'ny taratasy. Amin'ny ankapobeny, ny taratasy ampiasaina dia taratasy beige Daolin. Ny kalitaon'ireto taratasy roa ireto dia manana kalitao tsara indrindra eo amin'ireo taratasy fanoratana tsy mitovy. Ity karazana taratasy ity dia misy fahamendrehana kely, fandraisana ranomainty fanamiana, malefaka tsara, firafitry ny compact sy opaque, fanoherana rano mahery, vokany telo-mahery mahery ary kalitao tsara ary vidiny ambany!
Kaontera ho an'ny mpianatra namboarina
1. Ny taratasy dia iray amin'ireo toetra manandanja indrindra amin'ny kahie. Mety mila boky tsy misy rà penina ianao ary tsara kalitao amin'ny fanoratana. 2. Format: Manana habe isan-karazany isika mba hahafahana mifanaraka amin'ny filàna isan-karazany, izay azo tanterahina avokoa. 3. Faharetana: Ny vokatray dia mampiasa lakaoly fanafanana maripana avo lenta sy vy mihosin-tsofina vy, ny pejy anatiny dia miorina tsara, ary ny taratasy dia misy fampisehoana tantera-drano. 4. Fanamorana ny fampiasana: azo aparitaka fisaka izy io, ary azo esorina malalaka ireo pejy anatiny. Amin'ny ankapobeny, ny vokatray no safidinao tsara indrindra
2. Faharoa, ny lokon'ny taratasy. Fantatry ny rehetra fa ny taratasy beige, miloko marevaka, no safidin'ny olona mampiasa notepad hanoratany pejy anatiny.
Kitapo ho an'ny mpianatra pejy anatiny fiarovana
Fahatelo, ny hatevin'ny taratasy. Misy hatevin'ny taratasy roa matetika ampiasaina amin'ny takelaka: 80 grama sy 100 grama. Taratasy 80 grama dia manify kely noho ny taratasy 100 grama, mitovy ny hateviny amin'ny taratasy fanoratana mahazatra antsika. Ireo karazana taratasy roa ireo dia azo ampiasaina amin'ny pejy anatiny. Ny mahasamihafa ny karazan-taratasy roa dia: 80 grama ny taratasy manify kely, ary malemy kokoa ny kapoka, ary mahazo aina kokoa ny fahatsapana ny soratra; raha ny taratasy 100 grama kosa dia henjana kokoa ary manoratra Tsy dia tsara toy ny 80 grama, samy manana ny tombony ananany.
Kahie ho an'ny mpianatra pu hoditra
Safidy fitaovana taratasy natokana ho an'ny boky kahie namboarina
Fahefatra, ny fahaizan'ny taratasy. Ny fahaizan'ny taratasy manoratra dia tena zava-dehibe, izay manandanja indrindra amin'ny fizotry ny fanaovana taratasy (gluing). Ny ambonin'ilay taratasy tsara dia tsy maintsy milamina sy fisaka ary milamina ny fanoratany. Ny taratasy misy kalitao ambany dia manana fahatsapana hafahafa amin'ny fanoratana, ary ny taratasy dia mitabataba kokoa.
Qing kahie ho an'ny mpianatra vaovao
Previous: sary namboarina, kahie fampielezana pejy anatiny namboarina
Manaraka: Fomba manokana fanao mahazatra sariitatra saribakoly biby sticker
Notebook vita amin'ny hoditra vita amin'ny embossed
Notepad taratasy taratasy fakana tahaka
Notepad amin'ny rindrina malefaka
Tsara kalitao tontolo iainana PU leathe ...
loko vita amin'ny volon-koditra manokana